Sharciyada Cusub ee dhaqan galaya Bilowga Bisha July Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSharciyada Cusub ee dhaqan galaya Bilowga Bisha July
Sharciyada Cusub ee dhaqan galaya Bilowga Bisha July
June 29, 2019 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Sannad walba haddaayaa koowda bisha luulyo waxaa hir gala xeerar cusub iyo qaar wax laga bedeley ee uu baarlamanku ansixiyey. Waxaannu haddaba halka idiinku soo gudbineeynaa qaar ka mid ah kuwooda ugu muhiimsan.
Waxaa kor loo qaaday illa iyo 50 000 oo koron qofkiiba, halkii uu horay uga ahaa 25 000, saqafka Nidaamka dhimista khidmooyinka ee adeegyada howlaha guryaha laga qabto, qaasatan dadyoowga ey da’doodu ka hooseeyso 65 jir. Waana mid socon doonta illaa xisaab xirka sannadka 2019.
Hoos u dhigis cashuurta dadban ee daabacaadda internetyada (e-)
Canshuurta dadban ee dabacaaddada wargeeysyada iyo buugagta internetka oo hoos loo dhigey, iyadoona la gaarsiiyey 6%.
Waxaase xeerkaa aan hoos imaneyn xayeeysiinta, sawirrada dhaqdhaqaaqa iyo muusikada la dhageeysto.
Dugsiga xanaannada oo uu hoggaamiyo maamule (rektor)
Waa in qofka horjoogaha ka ah ee maamula howlaha dugsiyada xanaanada loogu yeeraa maamule, ee aan loogu yeerin magaca ”madaxa dugsiga xanaanada förskolechef. Maamuleyaasha dugsiyada xanaanada ayuu ku waajibayaa iney soo qaataan aqoon kororsi ey darajadaa ku qaadaneyaan. Wuxuuna qofku geleyaa, sida ugu dhakhsiyaha badan ee loogu magacaabo xilkaa illaa ugu dambeeyn muddo shan sannadood gudahood ah..
Sigaarka oo laga mamnuucay goobaha qaarkood
Waxaa la ballaarineyaa bannaannada goobaha bulshada ee ka caaggan in sigaarka lagu cabo laga bilaabo 1-da bisha luulyo 2019, gaar ahaan barxadaha dibadaha ee maqaayadaha, albaabbada laga soo galo goobaha sigaarka ka caagan iyo dhammaan goobaha bulshada, sidoo kale goobaha lagu sugo gaadiidka dad weynaha, goobaha leh deeyrarka ee loogu talo galey ciyaaraha iyo dhammaan barxadaha ciyaaraha ee bulshada. Sigaarka laga hadlleyo in ku cabiddiisa laga mamnuuco goobahaa ayey soo galaan sigaarka loo yaqaanno sigaarka elektroonimada (e-cigarett) iyo kuwa la buuxiyo, sigaarka dhirta carfoon ee sigaar ahaanta loo isticmaalo, hase yeeshee aanay tubaakadu ku jirin.
Dhallaanka oo ey fasax u geli karaan cid ka badan waalidka
Qofka waalid la deggan ayaa lala mid dhigey waalid, kolka laga hadleyo fasaxa ilmaha loo qaato, midkaasina oo xaq u siinaaya in shaqada fasax looga geli karo xaaladaha qaarkood si ilmaha loo hayo. Qofka waalidka ilmaha la nool ayaa lala xaq dhigey waalidka kolka laga hadleyo faa’iidada gunnooyinka waalidka, xitaa haddii qofka laga hadleyaa aanu horay ugu dhixin waalidka, ama aaney carruur isu laheyn. Wuxuu xeerku horey u ogolaa oo keliya gunnada ku meelgaarka ee waalidka.